डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्– ‘अन्नपूर्ण सर्किट स्वर्गको टुक्रा हो’ « Mero LifeStyle
डा. शेरबहादुर पुन भन्छन्– ‘अन्नपूर्ण सर्किट स्वर्गको टुक्रा हो’
मेरो लाइफस्टाइल	|| 11 September, 2021
कोरोना महामारीपछि फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने डाक्टरहरुमध्ये एक हुन्– सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन । उनी अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा थुप्रै राष्ट्र घुमेका छन् । डा. पुन प्रकृतिप्रेमी, जनावरप्रेमी र घुम्नमा एकदमै रुची राख्ने गर्छन् । जनावरप्रेमी भएकै कारण शाकाहारी भएको उनी बताउँछन् । स्वास्थ्य उनको पेसा हो भने यात्रा पहिलो हबी हो । उनको अनुभवमा यात्रा ज्ञान बटुल्ने एउटा माध्यमको हो । यात्रा गर्दा विभिन्न मान्छे तथा सँस्कृतिलाई नजिकबाट नियाल्छन् । त्यहीबाट उनी ज्ञान बटुल्छन् । यही सन्दर्भमा पुनसँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको घुमघाम वार्ताः
थाइल्यान्ड, सिंगापुर, रुस, फिनल्याण्ड, भारत, हङकङ, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत १० राष्ट्र घुमिसकेको छु । साथै, नेपालका थुप्रै जिल्ला पुगिसकेको छु ।
मलाई प्रकृतिप्रेमी भन्दा फरक नपर्ला । शान्त मनमोहक दृश्यहरू भएको ठाउँहरू नै मेरो घुमघामका गन्तव्य हुन् । नेपाल आफैँमा सुन्दर देश छ । यसकोबारेमा केही भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ । त्यसैगरी ८ देखि १० राष्ट्र घुमेँ तिनीहरु पनि आ–आफ्नो ठाउँमा राम्रो छन् । म अलि जिज्ञासु छु । त्यसैले पुरानो र प्राकृतिक कुराहरू भएको ठाउँ नै गन्तव्य बनाउँछु ।
घुमघामका लागि कसरी समय मिलाउनुहुन्छ ?
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ । इच्छा भयो भने वास्तवमा समय मिलाउन सकिनेरहेछ । व्यस्तताका बावजुत साथीहरूलाई समय मिलाउन भन्छु । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र होइन । जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि छुट्टी सबैले पाउँछन् । त्यही बेलाको मौका छोपेर घुम्ने समय मिलाउँछु ।
नेपालको अन्नपूर्ण सर्किट, अस्ट्रेलिया र इङ्ल्याण्डको घुमघाम अविस्मरणीय छ । अन्नपूर्ण सर्किट मेरो एकदमै वेस्ट ठाउँ हो । केही समय अघि त्यहाँ पुगेको थिएँ । त्यहाँ पुग्दा स्वर्गिय आनन्द प्राप्त हुन्छ । त्यसैगरी इङ्ल्याण्डमा म दुर्गम क्षेत्रमा बसेको थिएँ । त्यहाँ शान्त हरियाली पानी परिरहने भएकाले एकदमै रमाइलो गरेको थिएँ । यसैगरी अष्ट्रेलियाको मेलबर्न र सिड्नी यि दुई सिटीमा झोला भिरेर, खुट्टामा चप्पल लगाएर हिँडेको थिएँ ।
घुमघामको लागि जानु पर्ने ठाउँकोबारेमा इन्टरनेटमा सबै अनुसन्धान गर्छु । त्यसरी गर्दा कहाँ खाना खाने, कहाँ किनमेल गर्ने, कहाँ घुम्ने सबै जानकारी लिन्छु र त्यही अनुसार योजना बनाउँछु । एक दिन घुमिसकेपछि अर्को दिनको योजना त्यसरी नै तयार पार्छु ।
म त्यति भारी बोक्न रुचाउँदिन । मेरो यात्राका झोलाहरू हलुंगो नै हुन्छन् । ठाउँअनुसार मौसम फरकफरक हुन्छ । तै पनि सामान्यतया आफूलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू बोक्छु । पानी, सफ्ट ड्रिंक्स र सामानहरू किनेर राख्नका लागि सानो झोला बोकेको हुन्छु ।
नेपालमा घुम्न जाने ठाउँ अनगिन्ती छन् । अन्नपूर्ण सर्किट स्वर्गको टुक्रा हो त्यहाँ नछुटाई जान सिफारिस गर्छु । त्यही अनुसार देश अनुसार आआफ्नै विशेषता छन् । साथै अस्ट्रेलिया र इङ्ल्याण्डका विभिन्न ठाउँ घुम्न सक्नुहुन्छ ।
घुमघामलाई रमाइलो कसरी बनाउन सकिन्छ ?
प्रकृतिसँग एक्लै आफैमा रमाउँछु म । कुनै पनि ठाउँमा घुम्न जाँदा त्यो ठाउँलाई हेरेर कल्पना गर्छु । अलिअलि लेख्ने भएर पनि होला । त्यसैमा मलाई आनन्द महसुस हुन्छ । कसरी रमाउने भनेर फरकफरक हुन्छ । कहिलेकाँही साथीहरूसँग खानपानमै पनि रमाइलो गर्छु । तर म प्राय एक्लै घुम्ने गर्छु ।
घुम्न मन लागेको तर जान नसकेको ठाउँ कुन–कुन हुन् ?
रारा तालको बारेमा धेरै सुनेको छु तर जान सकेको छैन । पक्कै पनि राम्रो होला जस्तो लाग्छ । त्यहाँ कुनै दिन अवश्य जानेछु । त्यसैगरी नेपालको नौलो सुन्दर ठाउँहरू अध्ययन गर्न बाँकी त्यहाँ अध्ययन गरेर जानेछु । त्यसैगरी चितवनको सौरहा त्यहाँ पनि म जाने तयारीमा छु ।
घुमघाम प्रवर्द्धनका लागि पहिलो कुरा त थाहा नभएका भनौँ या गुमनाम रहेका नेपालका सुन्दर ठाउँहरू धेरै छन् । ती ठाउँहरूको प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । हालको परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटन घुम्नमा एकदमै उत्साहित हुन्छन् । उहाँहरुका लागि गुमनाम ठाउँलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
#सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन